निखिल राजका लेखहरू Martech Zone
द्वारा लेखहरू निखिल राज
आइतवार, मार्च १,, २०१। मंगलवार, सेप्टेम्बर 24, 2013 निखिल राज
मैले भर्खर गुगल खोजी ईन्जिन नतीजाहरूको केही परीक्षण गरिरहेको थिएँ। मैले शब्द वर्डप्रेस खोजें। WordPress.org को नतिजा मेरो ध्यान आकर्षित गर्‍यो। गुगलले सूचीबद्ध वर्डप्रेसलाई वर्णनको साथ वर्डप्रेस निजी प्रकाशन प्लेटफर्म: Google द्वारा प्रदान गरिएको स्निपेटलाई ध्यान दिनुहोस्। यो पाठ WordPress.org मा फेला परेन। वास्तवमा, साइटले कुनै पनि मेटा विवरण प्रदान गर्दैन! Google ले कसरी त्यो अर्थपूर्ण पाठ छनौट गर्‍यो? विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, यसले एकबाट वर्णन भेट्टायो
मङ्गलबार, जनवरी 15, 2013 मंगलवार, सेप्टेम्बर 24, 2013 निखिल राज
हामीले हिजो अर्को अजीब मुद्दा पत्ता लगायौं जब हाम्रो ग्राहकहरूको जैविक खोजी ईन्जिन प्रदर्शनको समीक्षा गरौं। मैले गुगल खोज कन्सोल उपकरणबाट आयात र पूर्वावलोकन र डाटा क्लिक क्लिक गरें र याद गरे कि त्यहाँ कुनै कम गणना थिएन, केवल शून्य र ठूला गणनाहरू। वास्तवमा, यदि तपाईं गुगल वेबमास्टर्स डाटा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, मात्र महान शर्तहरू कि यातायात चलाईरहेका थिए ब्रान्ड नाम र अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सर्तहरू जुन ग्राहकले दर्जा दिएको। यद्यपि त्यहाँ एक समस्या छ।
बुधबार, डिसेम्बर 12, 2012 मंगलवार, सेप्टेम्बर 24, 2013 निखिल राज
अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटहरूको लागि खोजी ईन्जिन अनुकूलन सधैं जटिल विषय भएको छ। तपाईं अनलाइन सुझावहरूको धेरै पाउनुहुनेछ तर तपाईंले सुन्नुहुने प्रत्येक सल्लाहलाई लागू गर्नु हुँदैन। तपाईंले अनलाइन फेला पार्नुहुने जानकारी प्रमाणीकरण गर्न समय लिनुहोस्। जबकि एक विशेषज्ञले यो लेखेको हुन सक्छ, यसको मतलब यो सधैँ तिनीहरू सहि हुन्छन् भन्ने छैन। In point in point, हबस्पटले एक नयाँ ebook SEO० SEO र वेबसाइट सुझाव जारी गर्‍यो। हामी हबस्पट र हाम्रो एजेन्सी को प्रशंसक हौं